ETshayina Ukutshaja okuNgenaNtyambo okuNgxamisekileyo kwiBulbhu yokuTshaja kwakhona iBulbhu ephumayo Izibane zeLed ezineBattery abavelisi kunye nababoneleli | Kasem
IBhalbhu ephathwayo yokuTshaja okuNgxamisekileyo yokuTtshaja iBhalbhu ephumayo Izibane zeLed eziPhumayo ezinebhetri
Ubushushu boMbala (CCT): 10000K
Iwaranti (Unyaka): 1-Unyaka
Ubomi (iiyure): 20000
Ixesha lokusebenza (iiyure): 1-4 iiyure
Uhlobo: Izibane zebhalbhu
I-Voltage Input (V): AC 180-240V
Isibane esiLuminous Flux(lm): 1800
Isibane soMzimba weMathiriyeli: ABS
Uhlobo lweSiseko: E27
Isicelo: ngaphandle kwangaphakathi
Imo Yokutshintsha: Iqhosha leManuwali
Unikezelo lwamandla: DC, iBattery Pack eTshajwayo, AC
Ibhetri: 2 * 1200mAh
Ikhava: I-PC Milky Cover
IiBhalbhu zokuKhanya ngokuNgxamisekileyo eKhaya, kwiShishini: Ezi bhalbhu zombane ezitshajekayo kwakhona zisebenza njengeebhalbhu eziqhelekileyo, kwaye zinokuzihlawulisa ngokwazo xa zisetyenziswa yonke imihla, zihlale zilayite iiyure iiyure ezi-4 ukuya kwezi-5 ngexesha lokumka kombane ekhaya.
3000K iiBhalbhu zokuKhanya eziMhlophe eziSoft:Xa kuthelekiswa nokukhanya kwasemini, i-3000K ibonelela ngesibane esithambileyo nesishushu ukunceda wena nosapho lwakho ukuba niphumle. Kunconywa kakhulu ukuba kufakwe kwigumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala.
IiBhalbhu zokuKhanya eziSebenza ngoMbane:750lm ngexabiso eliphantsi lamandla. I-15W iibhalbhu ze-LED ezingama-80W Ukulingana nokonga ubuncinci be-80% yamandla kunye neendleko zombane.
E27/E26 IiBhalbhu ze-LED zezibane zakho: Isiseko sezi zibane ze-LED ezitshajekayo yi-E27, ikwasebenza kwi-E26, ifanelekile kwizibane ezine-E27/E26 screw-in base. Yijike ngokulula kwisibane esifanelekileyo kwaye ukhanyise ikhaya lakho.
Ukusetyenziswa Okulula: Vele ujije izibane ngesiseko se-E27/E26 njengeebhalbhu zokukhanya eziqhelekileyo ze-LED, Isibane ngasinye siza kunye nehuku yesibambi, kunye nokukhetha kwimisebenzi yangaphandle efana nokumisa inkampu.
15W iBhalbhu ye-LED
Ibhalbhu yokukhanya ye-LED yenza phantse akukho bushushu. Oku kuthetha ukuba inokushiywa ivuliwe kangangeeyure. Isebenzisa iiwatts ezili-15 kuphela kodwa ivelisa ukuqaqamba okulinganayo kwi-60 watt - 75 watts incandescent bulb.
Sebenzisa njengeBhalbhu ye-LED eQhelekileyo: Krwela ibhalbhu yesibane kwisikrubhu esifanelekileyo. Isebenzisa umbane ukuvelisa ukukhanya kunye nokutshaja ibhetri yogcino.
IGqibele ukuya kwiiyure ezi-4
Xa umbane ucinywa, BECCALIGHTING Emergency LED Light ivula ngokuzenzekelayo ukuya kwiiyure ze-4. Ukukhanya kuya kuncipha kancinci xa ibhetri iphantsi.
Sebenzisa nje umnwe wakho njengomthombo wamandla ngokucofa iqhosha lale glowubhu yesibane.
Musa ukuHlawula Izixhobo eziNgxamisekileyo ezongezelelweyo
Ngale glowubhu musa ukuhlawula izixhobo zokukhanyisa ezongezelelweyo ngexesha likaxakeka. Zilungiselele ngezibane ezingxamisekileyo zokusilela kombane ekhaya kunye nokucima umbane.
Ingcebiso yeminwe iyasebenza
Ungacinezela incam yomnwe wakho phezu kwebhalbhu yesibane kwaye ubambe kwisiseko njengoko iza kuzilayita ngokuzenzekelayo.
Ukutshintshela iHook ephathekayo
Ibhalbhu yesibane nganye iza nehuku. Yixhome naphi na. Ifanelekile kwinkampu yangaphandle, ukukhwela intaba, ukukhanya komsebenzi, ukuhlala ngaphandle kwegridi.
Emergency LED Lighting Solution
Gcina ikhaya lakho liqaqambile naxa umbane ucimile. Ukwakhela-ngaphakathi ibhetri, ezi bhalbhu zikwazi ukutshajwa kwakhona zilayita ngokuzenzekelayo nje ukuba ubethwe kukucima komnyama.
1. Isiseko se-E27 kunye ne-B88 ekhoyo, i-aluminium nickel plated material, i-conductivity ephezulu.
2. Izinto eziphathekayo: Impembelelo ephezulu ye-ABS + PC, umqhubi we-IC osemgangathweni, ulawulo oluhle lobushushu, ubomi obude.
3. Ikhava yePC: Ukuhanjiswa okuphezulu, ukukhanya okukhanyayo kunye nokuthambileyo, akukho bungozi emehlweni.
RA Xa kuthelekiswa
Ngaphambili: Bug Zapper Light Bulb, 2 in 1 Mosquitoes Killer Lamp Led Electronic isinambuzane & Fly Killer
Okulandelayo: IBhalbhu yokuKhanya okuNgxamisekileyo eHlaziywayo yoMbane wokuMyelwa kweNkampi uMsebenzi waNgaphandle 9W 800LM E26 3000K 5000K
I-LED New incindi yobusi ejikeleza ukukhanya kwepaneli ehlengahlengiswayo
ukukhanya kwepaneli ye-LED 18w 12w kunye ne-alum engqukuva ...
Isisombululo esenziwe ngokwezifiso esiXhaswayo Imodyuli ye-LED ye ...
Izindlu zePP 3 intshi 4 intshi 6 intshi 8 intshi ezikhokelela phantsi...
manzi IP44 3w 6w 9w 12w 18w 24w flat led p...